Qaxootiga Australia 'oo ah qalab siyaasadeed' - BBC Somali
Qaxootiga Australia 'oo ah qalab siyaasadeed'
4 Disembar 2014
Image caption Wasiirka socdaalka Australia Scott Marrison
Mucaaradka dowladda Australia ayaa ku eedeeyay xukuumadda in ay u isticmaaleyso dadka magangalya doonka ah sida qalab siyaasadeed iyada oo isku dayeyso in ay meel mariso sharci muran dhaliyay oo saameynaya qaxootiga dalkaasi.
Wasiirada ayaa doonaya in golaha senet-ka in ay ansixiyaan sharci adkeynaya qaanuunka dadka magangalya doonka ah ka hor inta baarlamaanku aysan ka hadlin sanadkaan.
Wasiirka socdaalka Scott Morrison ayaa soo gudbiyay waxyaabo badan oo ay tahay in laga tanaasulo isaga oo rajeynaya in kooxda taageereysa ay guuleestaan.
Balse xubin sare oo ka tirsan mucaaradka Tony Burke ayaa sheegay in dowladdu ay dadka ka dhigatay la heestayaal oo kale, si sharciga loo meel mariyo.
Dowladda Australia ayaa haatan waxa ay xirtaa dhammaan qaxootiga iyo dadka magangalya doonka ee dalkaaasi ka soo galay dhinaca bada iyaga oo saaran doomo waxa ayna dowladdu u qaadaa xerooyin ku yaala xeebaha Papua Ginea da cusub iyo Nauru.
Dadka wax dhaleeceeya ayaa sheegaya haddi la ansixiyo sharcigan, in uu siinayo awood balaaran wasiirka socdaalka sidoo kalana u ogolaanayo dowladda in ay dib ucelin karto dadka magangalya doonka ah xataa haddii ay la kulmayaan halis iyo dhibaatooyin.